Ciidmada nabad gelyada wadooyinka Muqdisho oo soo saaray sharci layaab leh oo ka dhan ah gaadiidka ku daaha baarkinadda. | Salaan Media
Ciidmada nabad gelyada wadooyinka Muqdisho oo soo saaray sharci layaab leh oo ka dhan ah gaadiidka ku daaha baarkinadda.
19.4.13,Jimca(SM)Taliyaha Ciidamada nabad gelyada Wadooyinka Soomaaliya Cali Xirsi ayaa waxa uu shaaciyay in ay soo saareen sharci cusub oo ka dhan ah gaadiidka wadooyinka dhinacooda looga tago ee saacadaha laga maqanyahay.
Cali Gaab ayaa yiri, “Waxa aan heysanaa Wiish uu noo soo kireeyay gudoomiyaha gobalka Banaadir, waxaan ugu tala galnay oo aan uga hor tegeynaa gaadiidka wadooyinka dhinacyadooda la dhigo. Gaarigii saacad yaalla wadada dhinaceeda wiishkaasi ayaan ku qaadeynaa. Dadku gaadiidkooda yeysan uga tegin dhinacyada wadooyinka”.
Amarkaan kasoo baxay taliska ciidamada nabad gelyada wadooyinka ayaa waxa uu yahay mid loogu gogol xaarayo in laga hor tago gaadiid walxaha qara laga soo buuxiyay oo ladhigo dhinacyada wadooyinka muhiimka ah si loogu qarxiyo masuuliyiinta sar sare.
Shabaab ayaa waxa ay soo kordhiyeen werarro lagu fuliyo gaadiid lagu soo guray walxaha qaraxyada loo adeegsado kuwaas oo lagu qarxiyo saraakiisha dowlada iyo ciidamada AMISOM.